Global Voices teny Malagasy » “Ady Amin’ny Zavamahadomelina” Ataon’ny Fanjakana, Asehon’ireo Famonoana Tanora ny Vesatra Aterany sy Zakain’ireo Vondrom-Piarahamonina Marefo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Oktobra 2017 16:50 GMT 1	 · Mpanoratra Karlo Mongaya Nandika Tantely
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika, Tanora, Zon'olombelona
Nahafaty  ain'olona eo amin'ny 13.000 isa eo ny baikon'ny Filoha Rodrigo Duterte hanaperana ny loza mitataon'ny rongony, avy amin'ireo vondrom-piarahamonina mahantra any an-tanàndehibe ny ankamaroan'izy ireo.
Kanefa, nasehon ‘ny CCTV (camera) iray teny amin'ny toerana nisian'ny loza fa tanora tsy nanana fiarovan-tena no notaritarihan'ny polisy nialohan'ny nahafaty azy.
Novonoina tao Caloocan City i Delos Santos, ny 16 Aogositra 2017 lasa teo, ny herinandron'ny nahatratraran'ny Tokhang ny taha avo indrindra amin'ny resaka fahafatesan'olona maro be indrindra tao anatin'ny andro iray monja, tao Bulacan, faritany any avaratr'i Manille. Nidera  io rà nandriaka io ny Filoha Duerte:
Imbetsaka i Duterte no niteny tamin'ny polisy mba hitifitra  ireo ahiahiana ho misera rongony nefa be famaliana, hanery azy ireo hiady na tsy miady aza izy ireo, hanome  basy ireo ahiahiana nefa tsy mitam-piadiana ary hitifitra azy ireo raha manohitra izy ireny. Mampiseho tsara ny fomba fametrahan'ny polisy ireo basy sy porofo hafa hanenjehana ilay ahiahiana ho mpisera rongony ny famonoana an'i Delos Santos.
Andro vitsivitsy taorian'ny nahafatesan'i Delos Santos, ny 28 Aogositra 2017 hita maty tao amin'ny tranompatin'i Caloocan i Carl Angelo Arnaiz, 10 andro taorian'ny tsy nanjavonany, mpianatra tao amin'ny Anjerimanontolon'i Filipina. Ny farantnahitàna azy dia izy niala ny tranony nandeha nividy sakafo niaraka tamin'i Reynaldo De Guzman, izay hita faty 20 andro taty aoriana  tao amin'ny helodrano kely tany Gapan, Nueva Ecija, faritra ao avaratr'i Manille renivohitra .
Lazain'ireo tatitra ofisialin'ny polisy fa maty tanatin'ny fifampitifirana tamin'ny polisy i Arnaiz taorian'ny saika nandrobàny mpamily fiarakaretsaka iray. Ny tatitry ny fizahàna ny razana  manipika fisianà fambaranà fampijaliana maro tamin'ny vatan'i Arnaiz talohan'ireo tifitra indimy miendrika famonoana an-kitsirano natao azy.
Nahatonga fahaviniram-bahoaka amin'ny “ady amin'ny rongony” ireny fahafatesana ireny, izay lazain'ny maro ho fifandirana mihoson-drà nataon'ny governemantan'i Duterte amin'ireo vahoaka marefo ao amin'ny firenena, toy ireo mahantra sy ankizy. Maro ihany koa ireo vondrona isankarazany mpiaro zon'olombelona nifandona tamin'i Duterte noho ny fianianany  miverimberina ny hanavotra ireo polisy izay manao fanamparam-pahefana mandritra ireo hetsika Tokhang. Milaza izao ao amin'ny fanambaràna iray ny vondrona tanora Anakbayan :
Maro no miampanga ny fomba tsimatimanota hamonoana ireo mpikambana avy amin'ireo vondrom-piarahamonina mahantra, raha toa ireo olona ambony malaza misy ifandraisany amin'ny varotra rongony tsy ara-dalàna, tafiditra amin'izany ny zanaka lahin'i Duterte , Paolo Duterte Ben'ny Tanàna Lefitry ny Tanànan'i Davao, nampanarahana ny fizotry ny ara-dalàna.
Vao haingana i Paolo Duterte no niatrika  nanoloana ny Antenimieran-doholona mba handà ny lazaina ho fidirany amin'ilay fanaovana varomaizina mitentina 125 tapitrisa dolara mifandray amin'ny resaka fanafody methamphetamine tsy ara-dalàna, fantatry ny sarambabem-bahoaka any Filipina amin'ny anarana hoe “shabu”.
Tamin'ny voalohany, nolazain'ireo andian-tsaribakolin'i  Duterte ho mpanao heloka bevava mendrika ny ho faty ireo tanora novonoina, fa taty aoriana, rehefa nirongatra ny hatezeram-bahoaka, novainy ny fanambaràny ka nolazainy fa ireo mpifanandrina amin'i Duterte no nikotrika ireo famonoana.
Manoloana ny fahatezerana mitombo noho ireo famonoana, nanova ny fomba fiadiny  i Duterte tamin'ny fihaonana tamin'ireo ray aman-drenin'i Delos Santos ary avy eo ny an'i Arnaiz, ary nampanantena azy ireo fa hisambotra ireo polisy nanao ny tsy nety. Nilaza avy eo i Duterte fa nisy hery “fetsy ratsy” nanimba ny hetsika ady amin'ny rongony ataony.
Mandritra izany, miha maro hatrany ireo mivoaka amin'ny tontolon'ny fahanginana sy ny tahotra amin'ny fanehoana ny hatezerany noho ireo famonoana. Karazana fikambanan'olona maro, vondrom-piangonana, ary olon-tsotra, samy nanjohy ireo hetsika mba hanao fampitambaran-kery lehibe Hetsika Manohitra Ny Tsy Refesi-mandidy  hanoherana ny fanitsakitsahana ireo zo sy ny filatsahan'ny firenena ho ambany vahohon'ny lehilahy matanjaka mandrfitra ny fitondran'i Duterte.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/10/26/107297/
 hita faty 20 andro taty aoriana: http://www.philstar.com/headlines/2017/09/07/1736398/what-we-know-so-far-killing-reynaldo-de-guzman-14
 tatitry ny fizahàna ny razana: http://www.interaksyon.com/another-kian-ex-up-student-carl-arnaiz-tortured-before-he-was-killed-in-caloocan-pao-autopsy-report/
 manao : http://www.philstar.com/headlines/2016/07/02/1598740/duterte-pnp-kill-1000-ill-protect-you
 zanaka lahin'i Duterte: http://cnnphilippines.com/news/2017/09/03/president-rodrigo-duterte-pulong-duterte-senate.html
 nanova ny fomba fiadiny: http://www.gmanetwork.com/news/news/nation/624793/duterte-to-security-personnel-don-t-kill-defenseless-persons/story/
 Hetsika Manohitra Ny Tsy Refesi-mandidy: http://bulatlat.com/main/2017/08/29/groups-launch-movement-tyranny/
 fitaratr'i Duterte.: http://www.philstar.com/headlines/2017/05/24/1703241/drawing-parallels-marcos-duterte-says-martial-law-period-good